RUNTA IYO TILMAAMAHA NOLOSHA SOOMAALIYA
Iyadoo dowladda cusub ee Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay dib ugu noqoto dalkii, ayna soo celiso amarka iyo kala dambaynta kaddib sannado fowdo ah ayaa Joseph Winter oo ah weriye reer galbeed ah waxa uu booqday magaalada Muqdisho, waxaana uu ka diyaariyey warbixintan. Maxamed Xaaji (Ingiriis) ayaa warbixinta tarjumay:
Soomaaliya waa dalka keliya ee adduunka ku yaalla ee aysan ka jirin dowlad. Qarnigii 17-aad ayaa Thomas Hobbes oo faylasoof ahaa waxa uu yiri "noloshu waa kelinimo, faqri, wax xun oo qurmoon, axmaqnimo iyo wax gaaban haddii aanu jirin maamul dhexe." Qaar Soomaalida ka mid ah ayaa laga yaabaa inay maqleen Hobbes, laakiin badankood ayaa la qaba sifahaas, marka laga reebo kelinimada maadaama xiriirka qoyska iyo qabiilku ay weli Soomaaliya yihiin kuwo aad u adag.
Dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa la riday 1991-kii. Illaa waqtigaas, Soomaaliya waxay u kala qaybsanayd imaarado badan oo kala duwan oo ay ka taliyaan qabqableyaal dagaal, oo iska soo horjeeda oo mararka qaar isku dirira dhulka. Haddaba, sidee noloshu tahay Muqdisho kaddib toban sano in ka badan oo aan dowlad jirin?
Socod gaari oo 50Km ah oo ka soo billowda garoon Muqdisho u dhow illaa magaalada waxaad maraysaa toddaba jidgooyo oo mid walba ay maamulaan maliishiyo gooni ah. Mid kasta oo ka mid ah isbaaradan xuduudda laga gudbayo 'border crossings' dhammaan dadka baabuurta wata iyo gaadiidkuba waa inay bixiyaan kharash soo gelitaan 'entry fee' oo u dhexeysa 3 dollar illaa 300 oo dollar, taasoo ku xiran qiimaha badeecadda la sido iyo waxa maliishiyada ku badbaadin karaan.
Ma jirto wax muujinaya in lacagtani ku baxayso adeegga dadweynaha, sida caafimaadka, waxbarashada iyo waddooyinka. In badan oo lacagtan ka mid ah waxay ku baxdaa maliishiyadu wax ay ku marqaamaan oo aysan deyn karin oo ah Qaadka oo caleentiisa cagaarani la ruugo saacado dhowr ah. Dadka awooda waxay la safraan maliishiyo aad u hubeysan, sidaas awgeed waxaad dariiqa mari kartaa iyadoon wax dhib ah aadan la kulmin.
Koonfurta Muqdisho badankeed ayaa u muuqata goob xasiloon, laakiin qaybo kale oo ay ku jirto dhanka waqooyi ayaa qatar ay tahay in la booqdo. Inkastoo Maxamed Siyaad Barre si guud loogu soo hadalqabsado inuu ahaa keligii-taliye, dadka qaar ayaa hadda ku xusuusta iyagoo u muxubeysan in xilligiisii iskuullada iyo isbitaalladuba ay lacag la'aan ahaayeen.
Waxaa hadda la qiyaasaa in carruurta iskuullada gaartay ay xaqiiqdii 15% iskuulaadka tagaan, marka la barbardhigo wadammada faqriga ah ee deriska la ah Soomaaliya oo tiradu ay tahay 75% carruurta iskuullada tagta. Magaalada Muqdisho, iskuullo badan, kuleejooyin, jaamacado iyo xitaa dhismeyaal dowladeed ayaa u noqday xerooyin dad ku soo bara kacay caasimadda oo soo raadsaday meel ay uga nabad galaan dagaallo goobo kale ka dhacay.
Maadaama rag maliishiyooyin ah ay billaabeen inay afduubaan shaqaalaha samafalka, iyagoo dalbanaya lacago madax furasho oo aad u badan ayaa hay'adaha gargaarka badankood ay ka bexeen caasimadda iyagoo uga tagay xerooyinka qaxootiga kaalmo la'aan waxay doonto ha noqotee. "Qaar carruurteyda ka mid ah ayaa lows ku iibiya dariiqyada, si aan lacag uga helno. Ma awoodno inaan iskuullo u dirno," sidaas waxaa tiri Ladan Barrow Nuur oo qalbi jabsan, iyadoo casha chapatti ah ku karinaysa dab furan oo yaalla bannaanka teendho ay dhex deggan tahay. "Ninkeygu wuxuu ka caawiyaa dukaanleyda inuu u qaado badeecadahooda suuqa dhexdiisa, laakiin kuma filna, mar walba waan baahannahay" ayay tiri.
Haweeneydan ayaa waxay ku nooshahay siduu weriyuhu leeyahay wax ahaan jiray iskuul oo Muqdisho ku yaalla. Musqulo ma leh xerada qaxootiga ee ay ku jirto, waqtiga roobkuna cudurrada sida Maleeriyada, TB-da, shubanka iyo disantariyada ayaa si degdeg ah u fida. Iskuullada, Jaamacadaha iyo isbitaallada qaarkood ayaa sii wada inay shaqeeyaan, laakiin badankood gaar ayaa loo leeyahay, waana in lacag la bixiyaa. Kumannaan dad ah oo ay Ladan Barrow ka mid tahay ayaan awoodin inay bixiyaan 3 dollar oo ay ku kacayso inay arkaan dhaqtar, sidaas awgeed ayaa dadku waxay u dhintaan cudurro si sahlan looga hor tegi karo ama loo daaweyn karo.
Suuqa dhexe ee Bakaaraha ayaa u muuqda inuu soo kobcaayo. Ganacsiga qaarkiis, sida isgaarsiinta ayaa si fiican u hagaagsan, marka lagu daro telephoneska gacanta iyo rugaha internetyada oo ay ku jiraan dhismayaal cusub oo ku soo kordhay Muqdisho oo ah magaalo dhismayaasha badankood ay ka muuqdaan xagtimaha dagaalladii adkaa ee dhex maray maliishiyooyinkii iska soo horjeeday billowgii 1990-meeyadii.
Weriyuhu, waxa uu yiri diblomaasi Muqdisho jooga ayaa igu yiri "Soomaaliya waa suuq xor ah oo saafi ah." Laakiin, suuq xor ah oo saafi ah ma tahay wax fiican? Marka laga hadlayo fekrad ahaan aragtida, dhaqaaleyahannada qaar ayaa sidaas qaba, laakiin runta aadka u daran ee Muqdisho waxa taasi macnaheedu yahay in qoryaha iyo qalabka milatari ee kale in si xor ah looga heli karo suuq aan sidaas uga fogeyn bartamaha magaalada.
Waxaa laygula taliyey ayuu yiri weriyuhu inay aad qatar u tahay inaan booqdo suuqa, maadaama macaamiishu ay si joogto ah ugu dhex tijaabinayaan hubka, si ay u hubiyaan in qoryuhu shaqeynayaan inta aysan iibsan ka hor. Qiimaha qoriga AK47 ayaa waxa uu u dhigmaa tirakoobka sirta ganacsiga ee wadammo badan oo xasiloon.
Muddadii lagu jiray tartanka doorashada Madaxtinimada Soomaaliya bishii October ee sannadkan, qiimaha qorigu hoos ayuu u dhacay, iyadoo dadku rajeynayeen in maliishiyaadku aysan awood u yeelan doonin inay ku sii howlgalaan ciqaab la'aan. Laakiin, hal bil gudaheed iyadoon dowladdiiba la magacaabin, lana soo bandhigin qorshe cad oo ah sida iyo xilliga Cabdullaahi Yuusuf iyo kooxdiisu ay tegi doonaan Muqdisho, iskaba daa in wax kale la sameeyee ayaa qiimaha hubku aad kor ugu gurguurtay.
Jiritaan la'aan dowladeed waxa macnaheedu yahay in dollarka Mareykanku yahay xulka lacagta, xitaa qaxootigu waxay dalbanayaan lacagta adag. Lacagta shillin Soomaaliga ayaa weli la isticmaalaa, laakiin warqadaha lacagta ayaa ku soo ururay 1000 keliya. Saddex nooc oo lacag ah ayaa wareega, qaar horey uga haray dowladdii hore, qaar uu soo daabacay Madaxweynaha cusub ee la doortay xilligii uu madaxda u ahaa gobolka uu u dhashay ee Puntland iyo qaar kale oo ay saami ku lahaayeen ganacsato gaar ah.
Markii hore badeecadleyaasha Muqdisho qaarkood ayaa diiday inay lacagahan aqbalaan, laakiin hadda dhinac kasta ayaa laga isticmaalaa. Sidoo kale, soo daabacashada baasaboorada ayaa iyadana biribaati laga dhigay. 80 dollar ayaa in ka yar 24 saac waxaan ku noqday muwaadin Soomaali ah oo ku dhashay Muqdisho ayuu yiri Joseph Winter. Anigoo ka sii tagaya inaan qaato passportka noocaas ah ayaa nin ka ganacsayey waxa uu si naxariis leh ii guddoonsiiyey passport nadiif ah oo aan la tago gurigeyga oo aan ku dhejisto sawir.
Lacag wax yar ka sarreysa ayaa laygu yaboohay inaan ku qaato passport diblomaasi ah oo aan leeyahay dooqa inaan sheegto xilka iyo shaqada wasaaradda. Meel qoryaha iyo baasaboorada si xor ah looga helayo, kuwa raba inay qaadaan weeraro argagixiso waxay u tahay wixii ay rabeen. Maadaama ay jirto maqnaanshaha wax maamul ah, xerooyin ay ku tababartaan argagixisada waa macquul in laga sameyn karo Soomaaliya.
Inkastoo Soomaalidu ay awoodeen inay badbaadaan, qaarna xitaa ay rajaba qabaan, qof kasta oo aan la hadlo oo Muqdisho jooga ayuu yiri weriyuhu wuxuu quus ka taagnaa inay soo noqon karto wax leh saansaan sharci iyo kala dambayn. Iskuullada iyo isbitaallada ayaa diyaar u ah inay raacaan nabadgelyada ay liiska ku darsatay dowladda cusub. "Waxaan keliya rabaa dowlad, dowlad wax uun sameysa" nin baa sidaas igu yiri ayuu yiri. Dhammaanteen waxaan u muuqannaa inaan xiiseynayno inaan dhalleeceyno dowladaheenna, laakiin nolosha Soomaaliya waxay u muuqataa in waxa wax beddeli karaa inayba ka sii xun yihiin, sida uu qoray Philosopher Hobbes muddo hadda laga joogo 350 sano.
Gaashaanle ka tirsanaan jiray ciidammadii hore ee Soomaaliya oo hadda qaxooti ku ah London ayaa si fiican u soo koobay nolol aan dowlad lahayn sida ay u eg tahay "ma jirto wax aad sameyn karto marka wiilashaadii ay qoryo sitaan oo ay xadayaan wax walba oo aad haysato, xitaa dharkaaga." Majorku, waxa uu intaa raaciyey "waxaan ka dhashay qabiil yar, mana awoodo inaan is difaaco." "Halkan, waxaa jira xeerar dadku ay ixtiraamaan, sidaas darteed noloshaada nabad ayaad ku wadan kartaa" ayuu sii raaciyey.
Dadkii weriyuhu Xamar ku soo wareystay waxaa ka mid ahaa Nimco Cali Xasan oo u sheegtay inay Qaadka iibiso kaddib markii saygeedu uu furay laba sano ka hor. "Sababta igu kalliftay inaan Qaad iibiyo waxay tahay waxaan rabaa inaan ku koriyo laba carruur ah oo aan dhalay, runtii waa ganacsi halis ah, sababtoo ah macaamiisheydu waxay u badan yihiin maliishiyada hubeysan, haddii dowladi jiri lahayd shaqo kale ayaan raadsan lahaa ama waxaan heli lahaa nin i guursada si aan u noqdo hooyo guri" ayay tiri.
Waxaa kaloo uu wareystay Cabdullaahi Abuukar Maxamuud oo ah nin Lo' jire ah oo sheegay in dhowr jeer ay Lo'diisa dheceen rag hubeysan oo dilay walaalkiis, "noloshu waa nagu adag tahay, dowlad in la dhisay baan maqlay, waana taageersanahay, mar walba waxaan ka cabsadaa in la i dilo" ayuu yiri. Cabdi Daahir Guuleed oo ka mid ah qaxootiga deggan xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ayaa yiri "afar carruur ah ayaan leeyahay, iskuul iyo caafimaadna ma haystaan, dariiqyada ayay aadaan si ay u dawarsadaan, dowladda cusub ayaan ka rajeynayaa caawimaad."
Cabdiqaadir Cali Xaashi oo ah darawal bus wada ayaa waxa uu yiri "carruur iyo xaas baa i sugaya, nolosha ayaan halgan kula jirnaa, waxaana leennahay maahmaah tiraahda ninkii hooyadey guursada waa adeerkey, kama soo horjeedo dowladda Cabdullaahi Yuusuf."
Xaliimo Mubaarak Rashiid ayaa tiri "waxaan ka soo qaxay gobolka Shabeellada Dhexe, 14 sano ayaan qaxooti ku ahaa Xamar, runtii caawa ma haysto waxaan ku casheyno aniga iyo carruurteyda iyo ninkeyga, maskaxdeyda waxaa buux dhaafiyey sidii aan ku heli lahayn waxaan cunno oo ku badbaadno, in la wado nabadeyn Soomaaliya ah waan maqlay, laakiin kama fekero oo hardan baan nolosha kula jiraa."
Dadkii uu soo wareystay Joseph Winter waxaa ka mid ahaa fannaanka Soomaaliyeed ee heesaha westernka, Muqtaar Iidi Ramadaan oo yiri "ma sugaayo in Soomaaliya ay dowlad hesho mar kale, noloshu runtii aad bay ugu adag tahay fannaaniinta waqtigan, waxaana u baahannahay wax na difaaca maadaama aanan xiriir la lahayn qabiillada waaweyn, mar kasta oo aan gurigeyga ka soo baxo ma hubo inaan dib ugu noqonaayo iyo in kale."
Iidi Ramadaan oo sii hadlaya, waxa uu yiri "caweysyadii magaalada Muqdisho ka furnaan jiray dhammaantood waa xirmeen, waxayna noqdeen xerooyin qaxooti, waxaana hadda ka heesnaa bishiiba mar xafladaha aroosyada, waxaan ka cabsanaynaa ragga hubeysan, xaflad hadday jirto maliishiyo ayaa imaan karta oo dhac u geysan karta daawadayaasha, laakiin marka hore waxay jecel yihiin inay music-ga dhegeystaan."
Muqtaar Iidi Ramadaan, waxa uu yiri "xafladaha aroosyada Xamar sida ay u dhacaan isma lihid waxay ka dhacayaan waddan aan dowlad ka jirin, laakiin dadka u dhashay qabiillada hubeysan ayaa xafladahan dhigta, dadka kale si sir ah bay isku guursadaan iyagoo ka baqanaya in la dhaco oo la weeraro, dhac kale oo dhibaato nagu ah ayaa na haysta haddaan fannaaniinta nahay, cajalado sharci darro ah oo heesaheenna ah ayaad ka helaysaa meel kasta oo Soomaaliya ah, lacagna nagama soo gasho, waxaan rajeynayaa in dowladdaani soo celiso nabadda iyo rajada, laakiin ma aaminsani inay awood u yeelanayso, ma arko in qabqableyaashu ay si wadajir ah u shaqeynayaan, oo ay fulinayaan ballamadii ay qaadeen ee ah inay hubka ka dhigayaan maliishiyada, dhammaantood waxay rabaan Madaxweyne, mana yeelan karno 15 madaxweyne" ayuu yiri Iidi Ramadaan.